Manchester United Oo Heshay Jawaabta Ismail Sarr Oo Ay Lasoo Saxeexan Karayso Iyadoo Suuqu Xidhan Yahay - Gool24.Net
Manchester United Oo Heshay Jawaabta Ismail Sarr Oo Ay Lasoo Saxeexan Karayso Iyadoo Suuqu Xidhan Yahay
Manchester United ayaa heshay jawaabta dalab ay ka gudbisay weeraryahanka reer Senegal ee Ismail Sarr oo sharcigu u ogolaanayo inay lasoo saxeexan karto inta ka horreysa October 16, iyadoo uu xidhan yahay suuqa iibka ciyaartoydu.
Red Devils ayaa maalintii ugu dambaysay suuqa iibka ciyaartoyda waxay lasoo saxeexatay Edinson Cavani, Alex Telles iyo Amad Diallo, laakiin waxay wali kusii jirtay suuqa si ay sare ugu qaaddo awooddeeda.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo saddex saxeex oo kale oo maalintii ugu dambaysay uu isku dayay kusoo fashilmay, sida Ousmane Dembele, Federico Chiesa iyo Douglas Costa ayaa waxa uu u dhaqaaqay Sarr oo afka hore uga ciyaara Watford oo heerka labaac ka ciyaarta kaddib xili ciyaareedkii hore oo ay sallaanka Premier League ka dhacday.
Manchester United oo sannadkii horena 22 jirkan ku dalbatay lacag dhan £30 milyan oo Gini, laakiin ay Watford ka diidday inay aqbasho wax ka hooseeya £40 milyan oo Gini ayaa waxay isku dayday inay amaah kusoo qaadato laacibkan, laakiin jawaabtii ay sugayeen ayaa noqotay mid aanahy ku farxin.
Kooxaha Premier League oo loo ogol yahay inay naadiyada heerka labaad iyo kuwa kasii hooseeya kala soo saxeexan karaan ciyaartooyo inta ka horreysa October 16 ayaa waxay Watford u sheegtay in aanay siin doonin laacibkoodan oo uu ka caawin doono sidii ay heerka koowaad ugu soo laaban lahaayeen, haddii aanay ku helin qiime macquul ah oo aan ka hoosaynin £40 milyan oo Gini oo kaash ah.
Si kastaba, Manchester United ayaan la ogeyn go’aanka ay xiga ee ay qaadan doonto kaddib jawaabta Watford, waxaana la eegi doonaa haddii ay mar kale isku dayi doonaan inay dalab kale gudbiyaan iyo haddii ay meel kale uga leexdaan.